News Collection: के गर्दैछन् नायिकाले नयाँ बर्षमा ?
के गर्दैछन् नायिकाले नयाँ बर्षमा ?
मेरा लागि अङ्ग्रेजी नयाँ वर्षले कुनै अर्थ राख्दैन , मेरा लागि संधै भरी बैशाख १ कै प्रतिक्षा रहन्छ, मेरा लागि बैशाख १ नै मेरो नयाँ वर्ष हो । म अलिकति राष्ट्रवादी र देशप्रेमी पनि छु नि त ।
अङ्ग्रेजी पात्रोअनुसारको न्यू इयरका लागि मेरो कुनै ‘एक्साइमेन्ट’ छैन् । तै पनि साथीभाइबीच सौहार्दता बाँडेर न्यू इयर वीस सेयर गर्छु ।
कसैले मलाई ‘ह्याप्पी न्यू इयर’ भनेमा म ती सबैलाई ‘थ्याङ्क यू’ भनेर जवाफ दिनेछु । म अहिले ‘जब माया बस्छ’ चलचित्रको गीत छाँयाङ्कनका लागि व्यस्त छु ।
हरेक न्यू इयरका बेला म प्राय विदेशका कार्यक्रममा हुन्थेँ, धेरै वर्षपछि यसपल्ट म नेपालमा छु । यसपटक चलचित्र चिनोको प्रमोशनका लागि नेपालमा बसेकी हुँ । न्यु इयरका लागि होटल हायातमा डान्स पार्टी छ । मेरो यसपटककको न्यू इयर इभ त्यहीं हुन्छ ।
न्यू इयरकै ताकपारेर मेरो चलचित्र चिनो अल नेपाल रिलिज हुँदैछ, त्यसै मेसोमा म नेपाल टुरमा निस्कने योजना पनि छ । मैले यही चलचित्रका लागि हर्स राइडिङ र मार्सलआर्ट समेत गरेकी छु ।
मेरो त यस पटक बुबा वित्नुभयो, त्यसैले म शोकमा छु, न्यु इएरलाई विशेष रुपमा मनाउने मेरो सोंच छैन । त्यसमाथि मेरो होम प्रोडक्शनको चलचित्र तुलसीको निर्माण पनि अहिले धमाधम चलिरहेको छ । त्यसैले मेरा ध्यान न्यु इयरको रमाइलोमा भन्दा पनि चलचित्र तुलसीमै छ ।
थुप्रै साथिले नयाँ वर्ष पार्टीका लागि आग्रह गरिसकेका छन्, ती सबैलाई सरी भनेकी छु । बरु म चलचित्र ‘तुलसी’ को गीत छाँयाङ्कनका लागि न्यू इयरलगत्तै पोखरा र जोमसोमतिर जाने योजनामा छु । त्येले यसपटकको न्यु इयर परिवारसँग घरमा बसेर स्वागत गर्छु ।